Dawladda China oo la Cambaareeyay
Professor Ilham Tohti, oo Xabsi daain lagu xukumay
Dawladaha reer galbeedka ayaa dhaleeceeyay xukun xabsi daa’im oo maxkamad ku taalla China ay ku xukuntay mid ka mida aqoonyahanka ka soo jeeda qawmiyadda muslimiinta ah ee Uighurs-ka.
Shalay ayay ahayd markii maxkamadda gobolka Xinjang ee galbeedka China ay Professor Ilham Tohti ku xukuntay xabsi- Daa’im iyada oo lagu eedeeyay inuu maleegayay falal xiisad-abuur ah isla markaana dhiiri galinayay gooni isu taaga gobolka muslimiinta Wiigariska ee dalka China.
Xukunka lagu riday Professor Tohti ayaa loo arkay inuu yahay mid aad cadaaladda uga fog, Professorka ayaa loo arkaa in uu yahay qunyar socod isla markaana ay siyaasaddiisu tahay mid nabad ku salaysan.
Musliimnta Wiigariska ee ku nool Shiinaha ayaa waligoodba raadinayay inay helaan cadaalad iyo in lala simo qawmiyadaha kale eek u wada nool dal-weynaha Shiinaha.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday xukankan ay maxkamaddu riday, waxaana uu tilmaamay in cabudhinta dadka qunyar socodka ah sida Professor Tohti oo kale ay xaalaadda sii xumayn doonto.
Aqalka Cad ee Maraykanka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ayaa lagu sheegay in dawladda Maraykanku aad ugu xuntahay xadhiga Professor Tohti oo lagu tilmaamay inuu yahay aqoonyahan xushmad mudan, in bandanna ka soo shaqeeyay isku xidhka qawmiyadaha ku nool China.